Mahiga oo hadal qoraal ah ka soo saaray dilka gabar warbaahinta ka shaqaynaysay | Radiomaanta.com
You are here » Radiomaanta.com » Wararka » Mahiga oo hadal qoraal ah ka soo saaray dilka gabar warbaahinta ka shaqaynaysay
Mahiga oo hadal qoraal ah ka soo saaray dilka gabar warbaahinta ka shaqaynaysay
Posted By admin On 3rd April, 2013. Under Wararka |
Muqdisho, 25 Maarso 2013 – Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Dr Augustine P. Mahiga, ayaa aad uga naxay, kana xumaaday dikla loo geystay Raxama Cabdulqaadir, oo ka shaqaynaysay warbaahinta, gaar ahaan Idaacadda Caabudwaaq.
Dad aan heebtooda la garanaynin lana sheegay inay ku hubaysanaayeen bastoolado ayaa xalay Mw. Abdulqaadir ku toogtay oo ku dilay degmadda Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho.
“Waxaan si aad xoog badan u cambaaraynayaa weerarkan foosha xun, waxaan tacsiyo tiiraanyo leh u dirayaa qoyska iyo saaxiibada ay ka geeriyootay Raxma Cabdulqaadir”, ayuu yiri Ergeyga Danjire Mahiga.
“Soomaaliya weli waxay weli ka midtahay meelaha ugu khatarta badan ee ay saxafiyiintu ka hawlgalaan adduunka oo idil. Sawirkan xun waa inuu isbedelaa. Waxaan ugu baaqayaa Guddi-Hawleedka Madaxabanaan ee Xuquuqda Aadanaha ee dhowaan la sameeyay iyo hay’adaha dhaqangelinta sharciga inay xaqiijiyaan in kuwii geystay dilkan si degdeg ah caddaaladda loo horkeeno si loo joojiyo la xisaabtan la’aanta falalka dembiga”, ayuu raaciyay Danjire Mahiga.
Siddeed iyo toban saxafi ayaa la dilay sannadkii 2012, Raxma Cabdulqaadirna waa gabadhii ugu horeysay iyo saxafigii saddexaad ee la dilo sannadkan 2013.
“Bahda saxaafadda Soomaaliyeed waxay sannadahaas muujiyeen inay leeyihiin geesinimo iyo adkeysi. Soomaaliya waxay hadda u guurtay waa cusub oo qodobada dastuurku ay dammaanadqaadayaan xorriyadda hadalka, dowladduna ay ballanqaadday inay ilaaliso xuquuqda aadanaha, iyo inay si gaar ah u ilaaliso kooxaha taagta daran, oo ay ka midyihiin saxafiyiinta. Waxaan ugu baaqayaa dadka weerarkan geysta inay joojiyaan weerarkan naxariis darradaha ah”, ayuu yiri Ergeyga Danjire Mahiga.
« Axmed Madoobe: “Wax kasta oo shirka Kismaayo burburinaya ayaa la igula hadlay waana diiday”
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada oo maanta la kulmay madaxweynaha Jabuuti, kalana hadlay xaaladda dalka + Sawirro »